Taona vaovao, fiainana vaovao ary andao hifanampy! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2019 5:34 GMT
Lingua tamin'ny Fihaonambe tany Colombo , Sri Lanka
Alohan'ny handrosoako amin'ny lohahevitra manaraka amin'ny taratasim-baovao, dia te-hilaza aho fa iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ny maha-mpikambana ato amin'ny Global Voices, ary indrindra ato amin'ny Lingua, ny fimaroana sy ny fifandraisana ato amin'ity vondrom-piarahamonina ity. Indraindray ianao mahafantatra kolontsaina iray izay tsy hiainanao mihitsy, na farafaharatsiny tsy ho mora ny hiaina izany. Ho ahy manokana, tsy momba ny fandikan-teny fotsiny ihany, na matihanina momba izany, na koa manome ny fahaiza-manao eo amin'ny asantsika, fa tena idiran'ny tena manokana ihany koa rehefa mandika teny ianao. Ny maha-anao manokana tahaka ny fankamamianao no manosika anao handroso bebe kokoa. Mitombo hatrany hatrany izany fifandraisana sy fankamamiana izany ka mitarika fanaovana satroka hafa toy ny fanoratana, soritsoritra, fandraketam-peo, fitantanana fiarahamonina, ary maro hafa!
Fihaonan'i Taiwan, Okt 2018
Rehefa avy nilaza izany rehetra izany aho dia tsapako ankehitriny fa mila mangataka fanampiana aminao aho, ary tsy amin'izao indray mandeha izao ihany, fa aleo manao dingana iray isaky ny mandeha. Amin'ity resaka ity, dia te-hahafantatra aho raha toa ianao ka liana amin'ny fanampiana ahy hitady olona vaovao sy hamorona mpisera vaovao ho an'ireo tranonkala Lingua mila izany, ho endriky ny asa eo amin'ny fiteny sy faritra, mba hitazonana hatrany ity fiarahamonina mivelatra sy mifandray ity. Matokia ahy, hanitatra ny faravodilanitrao sy hanokatra ny sainao sy ny masonao ary ny fanahinao amin'ireo zavatra tsy noeritreretinao mihitsy izany traikefa izany. Mifandraisa amiko raha liana ianao!
Na dia tsy manam-potoana aza ianao, mandrisika anao mafy aho mba hahafantatra ireo mpiara-miasa aminao, sy ireo mpanoratra ny lahatsoratra izay adikanao! Takatro fa maro amintsika no mety ho matahotra na saro-kenatra, toy izany koa aho tamin'ny voalohany rehefa tafiditra tato amin'ny Lingua. Raha mila fanampiana ianao amin'ny fampidiran-dresaka, dia eto aho hanampy anao!
Lingua tamin'ny Fihaonambe tao Santiago summit, Shily. 2010
Farany, te-hisaotra ny mpandray anjara Lingua tsirairay aho noho ny fotoana sy ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny Global Voices! Ary misaotra manokana anareo Mpitantana ny Fandikan-teny Lingua, izay miasa isan'andro mba hahatonga an'ny Lingua ho toy izao! Tonga ny taona 2019, taona vaovao feno fanantenana goavana, feno fiovana tsara, sy feno fahalalàna olona miavaka. Tonga ny taombaovao izay ahatsapan'ny tsirairay aminareo ny maha-zava-dehibe anareo, ho an’ ny tenanareo sy ny hafa. Misaotra anao noho ny mahaianao anao. Maniry aho mba ho olona mahavita manampy sy mitari-dalana, araka izay nianarako taminao isan'andro. Hery ho an'ny Lingua!